Warbixin muuqaal ah oo SBC Tv ka diyaariyey dagaalada ka socda Muqdisho – SBC
Warbixin muuqaal ah oo SBC Tv ka diyaariyey dagaalada ka socda Muqdisho
Dagaalo culus oo sababay dhimashada iyo dhaawac ayaa ka soconaya maalintii sadexaad magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka Dayniile kuwaasi oo u dhaxeeya ciidamada dawlada KMG & kuwa AMISOM oo isku dhan ah iyo xoogaga Shabaabka ee dagaalka ba’an kula jira.
Dagaaladan ayaa waxaa ku dhintey in ka badan 1oo qof oo u badan dhinacyada dagaalamaya, iyadoo dhinacyadaasi ay kala sheegayaan guulo dhanka dagaalka ah iyo waliba in kan kale khasaare baaxad weyn leh u geystey.
Xarakada Shabaabka ayaa ku soo bandhigey deegaanka Ceelasha biyaha meydadka 70 askari oo ka mid ahaa ciidamada AMISOM oo ay sheegeen inay ku dileen dagaaladii ka dhacay degmada Dayniile, halka AMISOM ay qiratey in 10 oo kaliya dagaaladaasi kaga dhinteen, laakiin dad madaxbanaan ayaa inoo xaqiijiyey inay indhahooda ku arkeen meydadka ku dhawaad 70 oo AMISOM ka tirsan.
Telefishinka SBC ayaa warbixin dheer oo dhinacyo badan taabanaysa wuxuu ka diyaariyey dagaaladaasi ka dhacay degmada Dayniile, iyadoo warbixintaasi aad ku daawan karto aaga hore ee dagaalka sida la isku waydaarsanayo hubka noocyadiisa kala duwan iyo waliba gaadiidka dagaalka gaar ahaan Taangiyada AMISOM oo dagaalka si weyn uga qayb qaadanaya.
Sidoo kale warbixintan waxaad ku daawan kartaa meydadka ciidamadii AMISOM ee lagu soo bandhigey deegaanka Ceelasha Biyaha.
Si aad u daawato warbixintaasi muuqaalka ah Link-ga hoose ee VIDEO riix.HALKAN KA DAAWO